नेपाली न्यायको पाटो
जयप्रकाश गुप्ता शुक्रबार, चैत २०, २०७७
नेकपाको एकीकरणका सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको निवेदनलाई अदालतले खारेज गरेको छ।
अदालतको यस नयाँ आदेशलाई प्रचण्डले ‘आफूउपरको अर्को बज्र प्रहार’ भन्नु भएको छ। यसले मुलुकमा एक प्रधानमन्त्री भइसकेको मानिसको कठोर व्यथा देखाउँछ। यस आदेशका प्रति उहाँको पार्टीले पनि अस्वाभाविक प्रतिकृया जनाएको छ।
मुलुकमा केही दिनदेखि सांसद रेशम चौधरीको प्रसंग बडो चर्चामा रहेको छ। उहाँको रिहाईको माग र त्यसको विरोध संगसंगै छ। विरोध गर्नेहरूले अपराधी भनि अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई रिहा गरिनु हुन्न भन्ने तर्क गरेका छन्। खासगरी अहिले ओलीविरोधीहरूको यस्तो दबाब छ। यस्तो सोच राख्नेहरूले स्वयं सत्तामा रहेका बेला यस्तै निर्णयको प्रसस्त लाभ लिएको समय धेरै बितेको छैन।
सम्झनाका लागि व्यक्ति हत्याको मुद्दामा अदालतबाटै दोषी बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन माओवादीका सबैले प्रयास गरेका थिए। रिहाइ भएपछि धेरैले स्वागत गरेका थिए। अहिले बालकृष्णजी प्रम ओलीका साथमा हुनुहन्छ। ‘आतंकवादी’ घोषित ‘बिप्लव’ लाई भर्खरै मूलधारमा ल्याउन सरकारसंग सहमति भएको छ। ‘बिप्लव’ लाई आतंकवादी घोषणा गरिँदा नेपाली काँग्रेसले पनि सरकारी निर्णयको बिरोध गरेको थिएन। अहिले काँग्रेसका नेताहरू रेशम चौधरीको विपक्षमा उभिएका छन्।
यस्ता अरू कैयौं उदाहरणहरू छन्। यस्ता उदाहरणहरूको आलोकमा अहिलेका प्रतिकृयाहरूलाई विचार गर्दा एउटा सवाल मनमा उठने गर्छ–के नेपाली समाजमा न्याय वा अपराधका बारेमा वस्तुत समान दृष्टिकोण छैनन्? धेरैका लागि यो सवाल एक सामान्य र ध्यान दिनुनपर्ने महत्वहीन बिषय होला। थौरैले यसलाई ‘समान न्याय’ को रोहमा नेपाली समाज अत्यन्तै ‘पाखण्डी र पूर्वाग्रही’ रहेको तथा सामुदायिक रूपमा कमजोर रहेका वर्ग, शक्ति अभ्यासको रोहमा सीमान्त व्यक्तिहरूका निम्ति समाजको न्यायको चश्मा पूर्णत दोषी रहेको मान्यता छ।
नेपाली न्यायको पाटो: एक नेकपाको एकिकरणका सम्बन्धमा यस अघि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकनका लागि पूर्व प्रम...
Posted by Jay Prakash Ananda on Thursday, April 1, 2021
प्रतिकात्मक रूपमा विचार्दा के स्वयं गिरिजाप्रसाद कोईराला, खड्ग प्रसाद ओली, रामराजा प्रसाद सिंह, पुष्पकमल दाहाल, नेत्रविक्रम चन्द, ज्ञानेन्द्र शाह र अहिले रेशम चौधरीका कृत्यहरू समदृश्य छैनन् त? रेशम चौधरी त विद्रोहीमात्र हुन्, जसले निरपराधको हत्याको जिम्मेवारी पनि स्वीकारेका छैनन्। स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता र सरकारी अभियोजन पक्षको रिपोर्टका बीच ठूलो तथ्यगत फरक रहेको छ। अरूहरूले त हरेक घटनापछि सगर्व स्वीकारेको लामै इतिहास छ।
यो सवाल सानो वा महत्वहीन हुन सक्ला। यदि कमजोरका प्रश्नहरू विचारयोग्य नहुने समाजको निर्माणमा हामी र हाम्रो राज्य अगाडि बढेको छ भने केही भन्नु परोईन। अन्यथा, पर, सीमान्त स्थानमा छटपटाई रकेको एक नृपशु मधेसी, थारू, दलित, आदिबासी, जनजाति वा सवर्ण सबैको लागि न्यायको मापक एउटै हुनु पर्ने होईन र?
पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताकाे फेसबुकबाट